Nepal Dayari | गायिका टिका सानुको अनुहारमा एक्कासी के भयो ? मध्यरातमा गायक मानसिंह खड्का सहित आईंन मिडियामा -भिडियो हेर्नुहोस्
गायिका टिका सानुको अनुहारमा एक्कासी के भयो ? मध्यरातमा गायक मानसिंह खड्का सहित आईंन मिडियामा -भिडियो हेर्नुहोस्
असार २७, २०७८ आइतबार २१४० पटक हेरिएको
पछिल्लो समयकी लोकप्रिय गायिका रुपमा टीका सानूलाई चिन्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष दोहोरी गाउन अब्बल टिकासानुका हजारौहरु बजारमा आएका छन् भने सयौ गीतहरुमा अभिनय गरि बजारमा ल्याएकी छिन् । जसमध्ये अधिकांश गीतहरू दर्शक स्रोताले अत्याधिक रुचाएका छन् । तीज आउन लागे संगै अब टिकाले नयाँ तीजको गीत पनि बजारमा ल्याउँदै आएकी छिन् ।
टिकाले यस् वर्ष पनि नयाँ तीज गीतको तयारी गरेकी छिन् । तीज गीतहरु मध्य उनले “बुहारी” गीतप्रमुख रहेको छ। गत बर्ष सम्म टिकाले बुहारी ३ सम्म निकालेकी छिन् भने अहिले को बर्ष बुहारी ४ गीत पनि आउदै छ। यस् वर्षको लागि तीज गीतको अडियो भिडियो निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै टिकाले एउटा स्टाटस समेत आफ्नो फेसबुकमा लेखेकी छिन् ।
उनको स्टाटस हेर्दा ए’सिड आ’क्रमणको कथा गीतको भिडियोमा हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। किनभने उनले सार्वजनिक गरेको तस्वीरमा टीका ए’सिड आ’क्रमण भएको अवस्थामा देखिएकी छिन् । टिका सानुले फेसबुकमा पोस्ट गरेको फोटा अनुसार यस बर्षको तीजको गीत धेरै नै उत्कृस्ट रहेको देख्न सकिन्छ। टिका सानुले आफ्नो फेसबुक मा फोटो राख्दै यस्तो लेखेकी छिन्।
तीज गित (2078) बुहारी भाग4को को छायांकन सम्पन्न भयको छ। काम गर्दा धेरै अप्ठ्यारो भयो 2/3 चोटि स्थगित पनि भयो । आखिरी मा (2078-03-26) गते सकियो । काम गर्दै जादा कति समेट्न खोजियका कलाकार हरु छुट्नुभयो नसोचेका कलाकार जोडिनुभयो काम निकै राम्रो मेहेनत गरेका छौ सबै जना ले ! धन्यवाद छ सबैलाइ ।
कलाकार हरु= रमा थपलिया, सुरबिर पन्डित , गोमा केसि , दिपाशा बिसि , टीका सानू , बबिन ठकुरी ,प्रशान्त बि क , निशान्त बि क , चित्रा पुन , सम्पृया खड्का,बिक्रम आचार्य , धनमाया नेपाली, दिनेश श्रेष्ठ ,सन्ध्या रेग्मी, बिनिता बहिनी बालकलाकार राम लक्ष्मण लगायात अनिता लामा दिदी को ग्रुप लाई हार्दिक आभार छ। छायांकन = सागर गौतम निर्देशन = मान्शिङ खड्का श्रीङ्गार = राकेश रणपाल अब को 2/4 दिनमै टीका सानू युटुब च्यानल मार्फत आउदैछ प्रतीक्षा गर्नुहोला धन्यवाद ।